Izindaba - China International Beauty Expo
I-China International Beauty Expo (Guangzhou), eyasungulwa ngo-1989, ngaphambili yayaziwa njengeCanton Beauty Expo. Umbukiso wezokuhweba wemboni odumile emhlabeni wonke uqukethe ubuhle bobuchwepheshe, ukunakekelwa kwezinwele & isitayela, izimonyo, ukunakekelwa komuntu siqu, namaketanga wokuphakela phezulu kuya phansi. Lona unyaka wethu wama-30 singomunye wabahleli bezimboni ezinhle kakhulu nabahola phambili kwezimboni zokuhweba emhlabeni. Ingxenyekazi ye-CIBE isasebenza ngokuzimela ngokuxhaswa yi-All-China Federation of Industry & Commercial Beauty Culture & Cosmetic Chamber. Sekuyiminyaka ecishe ibe ngamashumi amathathu, inhloso kaCIBE bekukondla imvelo enempilo nokuncintisana kanye nesikhulumi sokuhweba ngobuchwepheshe esimeme embonini yobuhle yaseChina. I-CIBE isekela amabhizinisi amancane naphakathi, ihlakulela imikhiqizo yezwe lonke, isiza amabhizinisi amahle wobuhle ukuthi akhule futhi akhuphukele emncintiswaneni wamazwe omhlaba, ingenise imikhiqizo yamazwe omhlaba emakethe yaseChina, futhi ibenze bakwazi ukuthola ukuzwela kwamasiko nokuqonda okuphelele kwemakethe yaseChina.
Umbukiso omkhulu futhi ophelele kunazo zonke eChina
I-China international expo iqoqa imikhiqizo esezingeni eliphezulu kakhulu emhlabeni, ihlanganisa lonke uchungechunge lwezimboni (Professional Beauty, Cosmetics, Raw Materials & Packaging, Beauty Care Products, Skin Care Machine, Skin Care Diagnostic Tool, Medical Cosmetology) kuyo yonke intuthuko .
Lona ngumbukiso wochwepheshe wezobuchwepheshe, iMEICET iya minyaka yonke.
Okuhlukile kuneminyaka edlule ukuthi ngo-2020, uMeicet uletha imikhiqizo yakamuva -------ISEMECO Skin Image Analyzer.
I-ISEMECO Skin Image Analyzer iyidivayisi yokuqala yesikrini se-Portrait Skin Diagnostic Device yesibhedlela se-dermatology kanye ne-cosmetology Hospital.
2020 China (GuangZhou) International Ubuhle Expo.
Isikhathi: Sep. 4 kuya kuSepthemba 6, 2020.
Idokodo: 11.3 / B49